Learningmụta Teknụzụ Dị Mkpa Dị Ka Onye Nlekọta CRM: Lee ụfọdụ Ngwa | Martech Zone
Kedu ihe kpatara ị ga-eji mụta nkà na ụzụ dị ka onye njikwa CRM? N'oge gara aga, na-adị mma Onye Njikwa Ndị Ahịa ọ dị gị mkpa iji nkà mmụta uche na nkà ịzụ ahịa ole na ole.
Taa, CRM bụ egwuregwu egwuregwu karịa nke mbụ. N'oge gara aga, onye njikwa CRM na-elekwasị anya na otu esi emepụta oyiri email, onye nwere ọgụgụ isi karị. Taa, ezigbo ọkachamara CRM bụ injinia ma ọ bụ ọkachamara data nwere ihe ọmụma bụ isi banyere etu ndebiri ozi nwere ike ịdị.
Steffen Harting, CMO nke Inkitt
N'oge a, CRM bụ egwuregwu dị iche iche. Iji mezuo ịre ahịa ahịa na ọkwa, onye ọ bụla njikwa CRM kwesịrị ịchịkwa mpaghara atọ. Ndị a na-agụnye nchịkọta data, nchịkọta usoro, na ịmara ngwá ọrụ teknụzụ ahịa (na nchịkọta nke ndị na-egwu ahịa ahịa ugbu a na mpaghara a).
Nke a chọrọ ezigbo ihe ọmụma metụtara teknụzụ. Ọdịdị ịzụ ahịa dị mma karị nke ị chọrọ iji nweta, nnwale dị elu ndị ị ga-atụrụ ime.
Nhazi nke ndi mmadu na-etinye aka mgbe obula ichikota oke nke data sitere na usoro ndi ekesa. Nke a bụ ihe mere onye ọkachamara na-ere ahịa na-ere ahịa kwesịrị iji ghọta otú usoro ndị a si agwa ibe ha okwu na otu esi echekwa ma chịkọta data ahụ.
N'ime afọ ise gara aga, ndị CRM Managers anyị zutere na-eji ihe ngwanrọ ngwanrọ dị iche iche (Usoro Ndị Njikọ Ndị Ahịa, Usoro Ahịa Ndị Ahịa, Nkwalite Njikwa Nkwado, wdg) ma soro otu ma ọ bụ karịa na-arụ ọrụ kwa ụbọchị.
Anyị anọwo na-enyere ndị otu dijitalụ aka ili ọnụ n'etiti ndị mmepe na ndị ahịa ahịa afọ ise ugbu a na ihe anyị chọpụtara mgbe anyị jesịrị ọtụtụ narị ndị ahịa bụ na ndị ahịa ma ọ bụ CRM Managers bụ ndị ghọtara teknụzụ.
Tomasz Pindel, Onye isi oche nke Uzochukwu.io
Ka ị na - amata banyere teknụzụ, ọ ga - eme ka ị rụọ ọrụ gị nke ọma.
Teknụzụ dị na obi CRM.
Anthony Lim, Onye njikwa CRM na Pomelo Fashion
Ọ bụrụ n’ịghọta etu sọftụwia ị na-eji esi arụ ọrụ, ohere ya, na njedebe ya, ịnwere ike iji ya rụọ ọrụ nke kachasị. Ọ bụrụ na ị makwaara ntakịrị ihe ndị nrụpụta lingo, ọ dị mfe ịkọwa ma soro ndị otu ọgbara ọhụụ tụlee ihe ndị ị chọrọ. N'ihi ya, nkwurịta okwu ya na ndị otu mmepe na-aga nke ọma na ọrụ ha na-arụ ọrụ nke ọma. Nkwurịta okwu ka mma na nnyefe ngwa ngwa nke koodu ikpeazụ na obere igbu oge na ihe onwunwe.
Ọ bụrụ n ’ịmara ntakịrị SQL ma ọ bụ Python, ịnwekwara ike ịchekwa oge ma gbaa ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ n’onwe gị. Nke a nwere ike ịba uru, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe adc hoc na ndị mmepe gị nọ n'etiti ịgba ọsọ, ị chọghị inye ha nsogbu. Ime ihe n’onwe gị nwere ike ime ka usoro nyocha data dị ngwa maka gị ma hapụ ndị mmepe gị ka ha lekwasị anya na nnukwu ọrụ ha ga-eweta.
Mara tech bụghị a differentiator ọzọ maka CRM Managers; ọ ghọrọ isi ihe achọrọ.
Kedu Teknụzụ Teknụzụ I Kwesịrị Learnmụta Dịka Onye njikwa CRM?
Ikwesiri ima ihe di nkpa:
Nchekwa Data - olee otu esi echekwa data ahụ, gịnị bụ ndekọ, gịnị bụ ụdị data, na gịnị kpatara ịchọrọ usoro? Kedu mgbe ọ dị mkpa ịkwaga data, oleekwa otu esi atụ atụmatụ ego ya?
Njikọ usoro - I kwesiri ima otu esi ebu data site na ebe nchekwa data na oru ozo ka inwee ike ime ha ma gi meputa oru ndia.
Analytics - Ntọala nke sava na nsuso ndị ahịa na weebụ.
Weghachite - Ad retargeting na otu o si arụ ọrụ.
Nyocha MarTech Toolkit:
Kwesịrị ị na-enyocha mgbe nile ndị ahịa na-ahụ maka nkà na ụzụ 'ụzọ na usoro ntọhapụ. Ikwesiri ima ihe ndi puru ime bu ma nkpoko ugbua gi bu nke di nma. Dịka teknụzụ na-agbanwe, otu ahụ ka atụmatụ (na ọnụahịa) nke ndị na-eweta ngwanrọ dị iche iche si dị.
Ihe dị mma n'afọ gara aga nwere ike ọ gaghị abụ nke kacha mma n'afọ a, ma ọ bụ n'ihi na mkpa gị agbanweela ma ọ bụ n'ihi na enwere nhọrọ karịa ma ọ bụ ọnụahịa ka mma maka otu atụmatụ ahụ. Shouldkwesịrị ịnọ n'elu teknụzụ ọhụrụ na ndị na-eweta ọhụụ na ahịa iji bulie nchịkọta gị.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị wuru nchịkọta gị n'onwe gị, ị kwesịrị ịchọ mkpali maka atụmatụ ọhụrụ ma ọ bụ tụlee ịtụgharị gaa na ndị na-ere ahịa nke atọ ma ọ bụrụ na ọnụahịa dị na ahịa daa na ọ nweghịzi uru iji kwado ma melite ngwanrọ ngwanrọ gị.
Ebumnuche nke SQL na / ma ọ bụ Eke Ọgba:
Ndị a bụ asụsụ ndị kachasị mkpa eji eme ihe nyocha data nke nwere ike inyere gị aka ịme ajụjụ n’onwe gị n’agwaghị ndị mmepe maka enyemaka. Mụ ihe ndị bụ isi nwekwara ike inyere gị aka ịgwa ndị na-emepe gị okwu.
Ebee Ka Can Pụrụ Learnmụta Nkà Ọzụzụ?
Ndị otu gị - nke a bụ isi iyi kachasị mma na ụlọ ọrụ gị. Ndị mmepe gị maara ọtụtụ ihe banyere ngwa ọrụ ị nwere, yana maka ụfọdụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ọ gaghị ama maka teknụzụ kachasị ọhụrụ n'ebe ahụ, ha maara n'ezie echiche niile dị mkpa ịchọrọ iji soro ha rụọ ọrụ. Openmepe ma jụọ ajụjụ ga-ewetara gị ọsọ ọsọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịmalitere ịrụ ọrụ n'ọnọdụ a (ma ọ bụ na ụlọ ọrụ a).
Akwụkwọ - ọ nwere ike iyi ihe ochie, mana enwere akwụkwọ ole na ole dị mma iji mụta ihe gbasara CRM na CRM software. Nke a nwere ike ịbụ nhọrọ n'efu ma ọ bụrụ na ịchọta ọba akwụkwọ (lelee ọbá akwụkwọ mahadum, ọkachasị na Mahadum Ọzụzụ ma ọ bụ Ngalaba Azụmaahịa ma ọ bụ IT). Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụrụ na ị nwere ndenye aha Kindle (nke dị ugbu a na USA), ịnwere ike ịgbazite ụfọdụ akwụkwọ na isiokwu CRM yana n'ime atụmatụ ndenye aha gị.
Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa: Echiche na Teknụzụ
Akwụkwọ CRM: Ntuziaka Azụmaahịa maka Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa
CRM na Ọsọ nke Ìhè, Nke anọ: Social CRM 2.0 Strategies, Ngwaọrụ, na Usoro maka Isoro Ndị Ahịa Gị
Blọọgụ - enwere ọtụtụ blọọgụ a raara nye teknụzụ njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM). Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị ọkacha mmasị m:
Ndepụta nke blọọgụ 8 CRM kachasị elu site na Capterra
Akwụkwọ akụkọ dị n'ịntanetị - magazin n'ịntanetị dị n'etiti blọọgụ na akwụkwọ, na-enye ọtụtụ ozi yana gụnyere ndị na-eweta teknụzụ na-eduga.
200 OK bụ akwụkwọ akụkọ nke Voucherify.io mepụtara iji nyere CRM Managers aka ịmụ ihe nkà dị mkpa dị na teknụzụ. Ọ nwere isiokwu na-akọwa teknụzụ ọhụrụ na echiche teknụzụ, jiri okwu nwere ngwaọrụ dị ala na-enweghị koodu nke ndị na-abụghị ndị mmepe nwere ike iji mee ihe n'ụzọ dị mfe, ajụjụ ọnụ ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na-ekerịta ndụmọdụ na aghụghọ ha banyere otu esi amụta nkà dị mkpa maka ọrụ.
Ihe ọmụmụ n'ịntanetị - nke a bara uru karie ma oburu na ichoro imuta usoro nke nzuzo, SQL, ma obu Python klas kwesiri ibu ihe mbu. Enwere ọtụtụ akụrụngwa enwere ike ịbanye.
SQL nkuzi maka ndị ahịa
Skillshare - usoro mmụta na ịkekọrịta, na-enye nnwale n'efu.
EDX - usoro mmụta mmụta n'ịntanetị nke nwere ọtụtụ klaasị n'efu nke mahadum kachasị mma n'ụwa.
Ihe ngosi data - Eke Ọgba.
Software nyochaa weebụsaịtị:
Matrix Ahụmahụ Ndị Ahịa - Nyochaa nyocha CRM nke ọma.
Kappa, GetApp, G2Crowd - nyocha nke ngwa oru ngwanrọ dị iche iche, gụnyere teknụzụ ahịa.
Podcasts - Ọ bụrụ n’ịchọrọ ige ntị n’ihe na njem gị ma ọ bụ mgbe ị na-a coffeeụ kọfị ụtụtụ gị, pọdkastị dị mma! Nwere ike ịmụta ihe ma kwalite ọrụ gị n'ihu na-enweghị mkpa oge ọzọ.
CRM MVP pọdkastị
CRM Okwu Podcast
Agụ docs ahụ - ị nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe site n'ịgụ akwụkwọ nke ngwaọrụ dị iche iche ị na-eji ma ọ bụ nwee ike ịtụle iji ya. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ị ga-amụtakwa ọtụtụ okwu ndị nrụpụta sitere na ha.
Ilzọ ụkwụ - site na Salesforce bu uzo di egwu nke di na ntanetị.
Kedu nke kachasị amasị gị ịmalite ịmụ ihe, nke kachasị mkpa bụ ịmalite. Gwa ndị ọgbọ gị, gwa ndị mmepe gị okwu, atụla egwu akụkụ teknụzụ nke ihe.
Uzochukwu.io bụ ihe niile API na - mbu nweta ngwanrọ njikwa njikwa chọrọ nke kachasị mkpa onye nrụpụta iji jikọta, na-enye ọtụtụ atụmatụ na mwepu na igbe, ma ahaziri iji nyere ndị otu ahịa ike ịmalite ngwa ngwa ma jikwaa coupon na onyinye kaadị onyinye, onyinye, ozi aka, na mmemme iguzosi ike n'ihe.
ngosi: Martech Zone nwere njikọta njikọ na edemede a.
Tags: 200 okAnalyticsokpuokpuonyeisiCRMcrm na ọsọ nke ìhèakwụkwọ crmNtuziakaCm obere akwukwomanagerọrụ CRM managercrm mvp Podcastcrm okwu Podcastteknụzụ crmweebụsaịtị crmmatriks ahụmahụ ndị ahịanjikwa mmekọrịta ndị ahịanchịkọta datanchekwa datadatacampebe crmedxnwe2getappinyochankataejiji pomeloPythonretargetingnkasqlsteffen emebimwekota usorontọala teknụzụnyegharịa